netbook များအတွက်အကောင်းဆုံး distros များ Linux မှ
netbook များအတွက်အကောင်းဆုံး distros များ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | FileLet ရဲ့ UseLinux, ဖြန့်ဝေ
Windows သို့မဟုတ် Mac နှင့်မတူသည်မှာ Linux တွင်မတူညီသောဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုသုံးသောဖြန့်ဝေမှုအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုများသည်အချို့သော“ distros” များကိုအခြားသူများထက်ပိုမိုပေါ့ပါးစေသည်သို့မဟုတ်အချို့သည်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု (သို့) netbook ကဲ့သို့သောတိကျသောဟာ့ဒ်ဝဲအမျိုးအစားများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေထားသောစာရင်းသည်ကန့်သတ်ရန်မရည်ရွယ်ပါ။ netbook ပေါ်တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သောဖြန့်ဝေမှုများများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ယူဆချက်အရအကောင်းဆုံးသို့မဟုတ်နက်ဘွတ်ခ်များတွင်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောသူများအားအကြံပြုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။
1 netbook ၏အဓိကလက္ခဏာများ
2 ကောင်းသော netbook distro ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
5 Bodhi Linux
10 ၈။ Zorin OS Lite
11 ၉။ SolidX
12 ၁၀။ Google Chrome OS
အဓိကအလေးထားသည်မှာ၎င်းသည်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း (အလေးချိန်အနည်းငယ်သာရှိပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်သည်) အပေါ်တွင်မူတည်သည်။
စွမ်းအားသည်၎င်း၏ "ရွေ့လျားမှု" ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုများ (wifi, bluetooth စသည်တို့) အပေါ်များစွာမူတည်သည်။
၎င်းသည်အတော်လေးကျိုးနွံသော RAM, ပုံမှန်အားဖြင့် 1GB / 2GB ရှိသည်။
ကောင်းသော netbook distro ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဝိသေသလက္ခဏာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှု၏ GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးမှုကိုအောက်ပါအားသာချက်များရှိစေရန်လိုအပ်သည်။
ဒါကနည်းနည်း RAM ကိုစားသုံးသည်။
၎င်းတွင် "အဆင်ပြေသော" interface ရှိပြီး၎င်းသည် netbook တွင်တွေ့ရသောမျက်နှာပြင်အရွယ်အစား (သေးငယ်) နှင့်ကိုက်ညီသည်။
Jolicloud သည် Ubuntu ကိုအခြေခံသည်။ သို့သော်၎င်းသည် disk ပမာဏ၊ မှတ်ဉာဏ်နှင့်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားအကန့်အသတ်ရှိသောသတ်မှတ်ချက်များရှိသောကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Visual Interface (HTML5+ GNOME) သည်တက်ဘလက်တစ်ခုနှင့်ဆင်တူပြီး၎င်း၏အမြန်နှုန်းနှင့်အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်းအပေါ်ထင်ရှားသည်။ screenshot တွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း JoliOS သည်အဓိကအားဖြင့် web applications များ (ChromeOS style) ကို Mozilla Prism ကိုအသုံးပြုရန်အဓိကထားသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ VLC ဗီဒီယိုဖွင့်စက်ကဲ့သို့သောမူရင်း application များကိုလည်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါကဤ distro သည်ဖျော်ရည်အားလုံးကိုညှစ်လိမ့်မည်ဟုပြောစရာမလိုသော်လည်း၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ မျဉ်းကြောင်း။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သတိပြုသင့်သည်မှာ JoliOS ကို Windows သို့မဟုတ် Ubuntu (beta) အတွင်း၌အခြား application တစ်ခုကဲ့သို့ install လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းကိုနောက်ဆုံးတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ၎င်းကိုစမ်းသပ်လိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
JoliOS ကို download လုပ်ပါ
၎င်းသည် LXDE desktop environment ကို Ubuntu အခြေပြု distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုအလွန်နည်းပါးခြင်းနှင့်၎င်း၏ visual interface ၏ယခုဂန္ထဝင် WinXP နှင့်ဆင်တူသည်၊ ၎င်းသည် GNU / Linux တွင်ပထမဆုံးခြေလှမ်းများလှမ်းနေသူများအတွက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည်။
LXDE-based distros များအားလုံးကို netbook များအတွက်အထူးအကြံပြုသော်လည်း Lubuntu သည်အသစ်ရောက်ရှိလာသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏မြင်တွေ့ရသည့် interface နှင့် WinXP ၏ဆင်တူမှုကြောင့်သာမကကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော Ubuntu အသိုင်းအဝိုင်းသည်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်နောက်ဆုံးပြproblemနာများကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဖြေရှင်းနိုင်စေသည်။
Lubuntu ကို download လုပ်ပါ
၎င်းသည် Enlightenment ၀ င်းဒိုးမန်နေဂျာ၏အပြည့်အဝအသုံးချမှုကိုရယူသော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်ဗဟုသုတကိုအသုံးပြုသောဖြန့်ဝေမှုအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့် browser၊ စာသားအယ်ဒီတာ၊ အထုပ်စီမံခန့်ခွဲရေးကိရိယာစသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်အနည်းအကျဉ်းပါ ၀ င်သည်။
တိကျစွာဆိုရလျှင် minimalism သည် Bodhi Linux ၏နောက်ကွယ်ရှိအတွေးအခေါ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အသစ်ရောက်ရှိလာသူများအတွက်မထောက်ခံပါ။ ၎င်းကို Linux တွင်အတွေ့အကြုံရှိသောသူများအတွက်အကြံပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ distro နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအရာမှာအလွန်သာလွန်ကောင်းမွန်သော၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော desktop အတွေ့အကြုံကိုပေးသော၎င်း၏အလွန်မြန်သောအမြန်နှုန်းနှင့်အလွန်နည်းပါးသောစနစ်လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။
Bodhi Linux ကို download လုပ်ပါ
၎င်းသည် Debian ကို အခြေခံ၍ Openbox window manager ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအပြင်အဆင်သည်အမြန်နှုန်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအကြားကောင်းမွန်သောဟန်ချက်ညီစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Debian ကိုယ်တိုင်ကဲ့သို့တည်ငြိမ်သည်၊ အရင်းအမြစ်အကန့်အသတ်ရှိသောအသင်းများအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်အလွယ်တကူစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည့်ရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသောရိုးရှင်းသော interface ကိုထည့်သွင်းခြင်းအပြင်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။
ငါသည်ဤသည်မှာလက်ရှိရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံး GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
၎င်းသည် Puppy Linux ကိုအခြေခံသည်။ သို့သော် Ubuntu packages များကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဖော်ရွေသော desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိပြီး Mac OS X ၏ပုံပန်းသဏ္giveာန်အချို့ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Macpup သည်ပုံမှန်အားဖြင့် AbiWord, Gnumeric, SeaMonkey နှင့် Opera ကဲ့သို့အလွန်ပေါ့ပါးသောအခမဲ့ application များစွာပါရှိသည်။ အသုံးပြုသော window manager သည်နောက်တဖန် Enlightenment ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် system resources အနည်းငယ်နှင့်၎င်း၏ကောင်းသော graphical performance အတွက်ထင်ရှားသည်။
၎င်းသည် Arch Linux ကိုအခြေခံထားသည့် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောသုံးစွဲသူများအတွက်အကြံပြုထားသည့်ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် repositories ရှိသည်။ Pacman package manager နှင့် AUR (Arch User's Repository) သဟဇာတစသဖြင့် Arch features များကိုသိမ်းဆည်းရာတွင်အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန်ဖြန့်ဖြူးသည်။ XFCE ပါ ၀ င်သည့်အဓိက version အပြင်တရားဝင်ဗားရှင်း (ပိုမိုပေါ့ပါး) သည် OpenBox window manager ကိုအသုံးပြုသည်။ E17, MATE, LXDE, Cinnamon / Gnome-shell နှင့် KDE / Razor-qt ကိုအသုံးပြုသောအသိုင်းအဝိုင်းထုတ်ဝေမှုများလည်းရှိသည်။
Manjaro သည်၎င်း၏ရိုးရှင်းမှုနှင့်အမြန်နှုန်းကိုထင်ရှားစွာပြသပြီး Arch Linux ၏စွမ်းအားကို "ပျမ်းမျှ / အဆင့်မြင့်" အသုံးပြုသူလက်လှမ်းမီအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Manjaro ကို download လုပ်ပါ
၎င်းသည် ၀ ဘ်အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အစဉ်လိုက်စံနမူနာဖြစ်သော "cloud-based" operating system တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Lubuntu ကို အခြေခံ၍ LXDE desktop environment ကိုအသုံးပြုသည်။
အခြား "web-centric" ဖြန့်ချိမှုများနှင့်မတူဘဲ Peppermint သည် Windows မှလာသူများနှင့်ဂန္ "Start" menu ကိုပိုမိုနှစ်သက်သူများအတွက်အလွန်ဖော်ရွေသော interface ရှိသည်။
Peppermint ကို download လုပ်ပါ
၈။ Zorin OS Lite
အခြေခံအားဖြင့် Zorin OS ကိုအခြားလည်ပတ်မှုစနစ်များ၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုတုပရန်လုပ်သည်။ Windows 2000 သို့မဟုတ် Mac OS X ကိုသင်ရွေးနိုင်သည်။ Windows အသုံးပြုသူများအတွက်ဤ distro သည်အကျွမ်းတဝင်ရှိသူကိုကြည့်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းထားသော application အနည်းငယ်သာပါရှိသည်။
Zorin ကို download လုပ်ပါ
SolydX (XFCE) သည် Debian ကိုအခြေခံသည့် semi-rolling release ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်မှာအသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးတည်ငြိမ်ပြီးလုံခြုံသောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ netbook များအတွက်အကြံပြုထားသောဗားရှင်းသည် KFC ကိုပြန်လည်သတိရစေသော်လည်း Desktop environment တစ်ခုအဖြစ် XFCE ကိုအသုံးပြုသည်။ SolydX သည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအတွက် wicd ကွန်ယက်မန်နေဂျာကိုအသုံးပြုသည်။ Flash နှင့် MP3 ကုဒ်များကိုမူလအတိုင်းတပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ပေါ့ပါးသော application များဖြစ်သော Firefox, Exaile, VLC, Abiword နှင့် Gnumeric တို့ပါ ၀ င်သည်။
SolydX ကို download လုပ်ပါ
၁၀။ Google Chrome OS
နာမည်တူဘရောက်ဇာနှင့် Linux ပေါ်တွင်အခြေခံထားသော "web-centric" operating system တစ်ခု။ ၎င်းသည်လူကြိုက်များသော Chromebook များတွင်အသုံးပြုသောစနစ်ဖြစ်သည်။
Google သည်အထင်ရှားဆုံးသောအချက်တစ်ခုမှာ boot speed 8 စက္ကန့်နှင့်အတော်လေးတိုတောင်းသော shutdown time ရှိသည့်စနစ်၏အမြန်နှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ web applications များဖွင့်လှစ်သောအမြန်နှုန်းအပြင်။ Cloud computing အရစာရွက်စာတမ်းများ၊ application များ၊ extension များနှင့် configurations များအားလုံးကို online မှာ back up လုပ်ထားပါတယ်။ အကယ်၍ အသုံးပြုသူသည်သူ၏စက်ပျောက်လျှင်သူသည်အခြားစက်တစ်ခုကိုရယူနိုင်သည် (သို့) အခြားစက်မှရယူနိုင်သည်၊ သူယခင်သိမ်းထားသည့်အချက်အလက်များအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။
ChromOS ကို Download လုပ်ပါ
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလောကမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း netbook တွေအတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါတယ်။ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြခဲ့သောဖြန့်ဝေမှုများကို ဦး စားပေးအစီအစဉ်မထားကြောင်းရှင်းလင်းသင့်သည်။ အဖြစ်မှန်တွင်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုသည်တစ်ခုချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည့်ကွဲပြားခြားနားသောဖြန့်ဖြူးမှုဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာ Lubuntu, Crunchbang (သို့) MacPup ကိုစမ်းကြည့်ဖို့ "newbies" ကိုအကြံပေးလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့သူတွေက Manjaro (သို့) SolydX ကိုစမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်ပေးနိုင်တဲ့ဒီအလှည့်ကျအသုံးပြုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီတော့ဒီဝင်ငွေက netbook ရှိသူတွေနဲ့ Operating System ကိုပြောင်းလဲဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ပိုပြီးအသုံးဝင်လာမှာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » netbook များအတွက်အကောင်းဆုံး distros များ
121 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ကျွန်ုပ်၏ netbook တွင် Debian ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့သည်။ ငါ Chrome OS> သုံးရန်ပင်မေ့သွားသည်
လီယွန် Jl ဟုသူကပြောသည်
ဤ Compos Presario အတွက်မည်သည့်ဖြန့်ကျက်မှုမျိုးကိုမဆိုဤအသစ်အတွက်သာကျွန်တော် linux သို့ပြောင်းလိုလျှင်
Leon Jl အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ Manjaro (သို့) Lubuntu ကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။
Sasori ၆၉ ဟုသူကပြောသည်
64-bit Manjaro XFCE (ကျနော့် Laptop မှာ 6GB RAM ရှိတယ်) နဲ့ Laptop အရမ်းပူလာတယ်။ ငါ Dota2ကိုကြိုးစားစမ်းကြည့်တော့အရမ်းပူလာတယ်။
pansxo အတွက် ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်ဟာ့ဒ်ဝဲပြproblemsနာများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သင်အားထုတ်မှုများစွာကိုပရိုဆက်ဆာထဲသို့ထည့်မထည့်ပါကအပူမပူရန်လိုသည်၊ linuxmint xfce 64 bit ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအရာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်။ ဆက်လက်အပူပေးနေလျှင်သင့်ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းစေပြီးအပူငါးပိကိုပြောင်းပါ။ မင်္ဂလာပါ။
pansxo, en ။ စာပြန်ပါ
ရှည်လျားပြီးသင့်လျော်သောဖြန့်ဖြူးရှာသောလမ်းအကွေ့အကောက်များသော။ ငါအနည်းဆုံး distros 10 ကိုစမ်းသပ်ပြီးပြီ။ လက်တော့ပ်အပူအပူလွန်ကဲသည်။ ၎င်းသည်ဟာ့ဒ်ဝဲပြproblemနာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် Linux ပြproblemနာတစ်ခုနှင့်လူသိများသောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါ ubuntu, lubuntu, xubuntu, kubuntu, debian mate, debian kde, debian xfce, crunchbang (bunsen), crunchbang ++, linuxmint kde, linuxmint mate (အနိမ့်ဆုံးသည်အပူဆုံးအပူရှိန်ဖြစ်သော်လည်းလျှော့ချခြင်းမပြုသေး 70 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) ။ အပူမပြင်းသောတစ်ခုတည်းသော distro သည် Kali နှင့်ဖြစ်သည်။ Kali ငါ Kali ကိုအဓိက distro အဖြစ်မလိုချင်ပါ၊ ပို၍ သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးကျဉ်းမြောင်းသောအရာတစ်ခုကိုလိုချင်သည်။ ငါ solydx ကိုကြိုးစားကြည့်မယ်
Luis Miguel Mora ဟုသူကပြောသည်
မည်သည့် Ubuntu-based distro တွင်မဆို cpufreq ကို install လုပ်၍ PowerSave mode ထဲထည့်ပါ။ ၎င်းသည် Processor အသုံးပြုမှုကိုနိမ့်ကျစေပြီးအပူမပေးပါ (လည်းသင်၏အပူချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ရန် psensor ကိုထည့်ပါ)
Luis Miguel Mora ကိုပြန်ပြောပါ
netbook အတွက်မဟုတ်ဘဲ Acer အတွက်ဘာ Linux operating system ကိုသင်အကြံပြုချင်ပါသလဲ။ ငါကပိုမြန်စေချင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာအတော်လေးနှေးကွေးတဲ့အမှန်တရားကိုပြောဖို့ပဲ
Gustavo Ramirez နေရာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
၁၀.၁ လက်မဖန်သားပြင်ရှိတဲ့ HP Mini3အတွက် distros ၃ ခုကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်၌တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်မှာကြိုးမဲ့ဒရိုင်ဘာသည်၎င်းကိုဘာမှမလုပ်ဘဲအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြိုးမဲ့ဒရိုင်ဘာများဖြင့်သင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုပြုပြင်နိုင်သည်။ 😉
Crunchbang: ငါကြိုးစားပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးသည် Debian ကို အခြေခံ၍ အလွန်ပေါ့ပါးခြင်း၊ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အခြား distros များမှ "eye-candy" အားလုံးကိုမမျှော်လင့်ပါနှင့်။ netbook အတွက်အလွန်ကောင်းသည်မကောင်းပါ။ ငါပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ကြိုးစားနေသည်၊ ပြင်ဆင်မှုအားလုံးနီးပါးကို configuration file များတွင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကောင်းသောအရာက၎င်းအတွက် menu အတွက် launchers များကိုယူဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုးဆုံးကတော့ကြိုးမဲ့စနစ်သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အလုပ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤအချက်၏အားသာချက်မှာသင်သည်၎င်းကို Ethernet cable မှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်ဆိုလျှင်မည်သည့်ပြproblemနာမှမရှိဘဲအရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည် multimedia အစရှိသည့်နောက်ဆုံးပေါ်ပရိုဂရမ်များနှင့်ဒရိုင်ဘာများကိုစတင်သည့်စာသားစာသားကိုယူဆောင်လာသည်။
EasyPeasy - ဒီဖြန့်ဖြူးခြင်းကို netbook တွေအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားတယ်၊ ကျွန်ုပ်ကတပ်ဆင်လိုက်တယ်၊ ကြည့်ရတာကောင်းတယ်၊ ကြိုးမဲ့စနစ်နဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အလုပ်လုပ်တာမို့စမ်းသပ်ဖို့အချိန်မပေးသေးဘူး။
OpenSUSE 12.1 (Gnome) - ဒီ distro ကိုကျွန်တော် install လုပ်ထားတယ်၊ ကြိုးမဲ့ဒရိုင်ဘာကဘာမှမလုပ်ဘဲအလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါ Chrome နဲ့ multimedia codecs တွေ install လုပ်တယ်။ ပြီးတော့သူကပြanyနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်တယ်။
သင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤ netbook သည်အင်တာနက်၊ မေးလ်၊ LibreOffice စသဖြင့်စစ်ဆေးရန်အဓိကဖြစ်သည်။ နှင့် OpenSUSE နှင့်အတူကငါ့အဘို့ကြီးသောအလုပ်လုပ်တယ်။ အဓိကအားဖြင့်တော့ GNOME3ကကောင်းတယ်၊ ငါက ၂ ထက်ပိုကြိုက်တယ်
Gustavo Ramirez ကိုပြန်ပြောပါ
ငါထပ်တူထပ်တူရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်။ Lubuntu၊ Elementary OS Luna နှင့် Freya နှင့် Deepin Linux တို့၏ beta 1 နှင့်2တို့ကိုစမ်းကြည့်သည်။ wi-fi ကဒ်ကိုပထမဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောတစ်ခုတည်းသော distro မှာ Deepin Linux ဖြစ်သည်။ သို့သော်အနည်းငယ်နှေးကွေးသောအချိန်များရှိသည်။ မူလ OS တွင်၎င်းကို activate လုပ်ရန်လိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စီးပွားဖြစ် driver ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် Lubuntu သည်သီးခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင် driver ကိုထည့်သွင်းရန်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည် !!! ...
ယောက်ျားတွေ ... netbook နဲ့မှတ်စုစာအုပ် ... သူတို့ကမတူကြဘူး ... အမှားမလုပ်မိကြဘူး ... မှတ်စုစာအုပ်ကသေးငယ်တယ် ... ဒါကြောင့် distros အားလုံးဟာ ၁၁ လက်မခန့်ရှိသော screen ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ .. Ubuntu 11 ... အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်နောက်ခံပုံပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအရာများပြောင်းလဲခြင်းစသည့်ရွေးချယ်စရာများအတွက်ဝင်းဒိုးတစ်ခုဖွင့်သောအခါ ... ၀ င်းဒိုး၏အောက်ပိုင်းကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးလက်ခံသို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ခြင်း (ဥပမာပေါ် မူတည်၍) အမှုဖွင့ ်၍ မရနိုင်ပါ။ မျက်နှာပြင်ရွေးစရာများထဲမှတစ်ခုသာပေါ်လာလိမ့်မည်။ ပြောင်းလဲခြင်းမဖြစ်နိုင်သော ... msi, hp နှင့် acer နှင့်ငါကြိုးစားခဲ့သည်။ သုံးခုလုံးနှင့်ပါ။ မှတ်စုစာအုပ်မျက်နှာပြင်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသိရင် ps လိုပဲ gachos ... နှုတ်ခွန်းဆက်ပါ။
Netbook တစ်ခုသည် ၁၀ လက်မခန့်ရှိသောမျက်နှာပြင်ငယ်ကွန်ပျူတာဖြစ်သည်
xubuntu နှင့် lubuntu သည်သင့်အတွက်အဆင်ပြေနိုင်သည်။ ငါ xubuntu 14.04 ကိုသုံးပြီးလွန်ခဲ့သော 1 နှစ်က asus neetbook နှင့်အတူ 8 Gig ram ကိုအတူကောင်းစွာခဲ့ပါတယ်။ Jorge ကြိုဆိုပါတယ်
ပြီးတော့ xpud ကော။ ဒါကအရမ်းမြန်ပြီးအတော်လေးကွဲပြားခြားနားပြီးအထူးသဖြင့် Desktop မှာသုံးသူတွေအတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။
Skype ကို သုံး၍ ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်တစ်ခုလုပ်နိုင်သည်။ လုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ Open Office နှင့်လုံလောက်သည်။
အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ Acer SSD အလုပ်လုပ်သောအခါရပ်လိုက်သည်။
Juan Barra ဟုသူကပြောသည်
၎င်း Processor အမျိုးအစားအတွက် Ututo Atom ကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်
Juan Barra ကိုအကြောင်းပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ laptop တွင်ပြသနာရှိပါက UBUNTU 11.10 ကို application တစ်ခုအနေဖြင့်ထည့်သွင်းထားသော်လည်းပန်ကာကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့် ၀ င်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်တစ်ချိန်လုံးအလုပ်လုပ်နေခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ PC အလွန်ပူလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်သိလိုပါသည်။ ဤအကဒီမှာ featured distros အတူ။
Raimundo riquelme ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်မှာ Samsung netbook မှာ Ubuntu 12.04 ရှိတယ်။ ကျွန်တော်အရမ်းပျော်တယ်။ အခြားရွေးချယ်စရာများကိုသိရန်မခက်ခဲသည်ဖြစ်သော်လည်း🙂နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်း
Raimundo Riquelme အားပြန်ပြောပါ
ရီကာဒို C. လူစီရို ဟုသူကပြောသည်
Ubuntu 150 နဲ့ Joly တို့ကိုငါစမ်းခဲ့တဲ့ Samsung N12.04 Plus netbook ရှိတယ်။ သူတို့ကဆယ်ယောက်ပါ။ ယခုတွင်ငါသည် Mandriva 12 ကို install လုပ်ပြီး၎င်းသည်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သည်။ KDE desktop ဖြင့်အသုံးပြုသည်။
Ricardo C. Lucero အားပြန်ပြောပါ
Daniel Rossell ဟုသူကပြောသည်
Kuki Linux ကိုတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မရနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်မည်မျှပင်စဉ်းစားသည်ဖြစ်စေ၎င်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လင့်ခ်များကိုရှာမတွေ့ပါ။ ငါတစ်ခု Aspire တစ်ခုရှိသည်နှင့်တကယ်ဖြန့်ဖြူးကြိုးစားချင်ပါတယ်။ ငါဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ဘယ်မှာမည်သူမဆိုသိလား
Daniel Rossell အားပြန်ကြားပါ
မူလတန်း OS 10 ဖြစ်ပါတယ်! ငါသုံးတာကငါ့ရဲ့အဓိက OS ပဲ
ISIS ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမည်သို့မည်ပုံမြင်ရမည်၊ ISIS များကိုမြင်သောအခါ၎င်းတို့သည်ညှိုးနွမ်းသွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Linux တွင်တည်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သောအခြေခံအားဖြင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်ကိုလုပ်သည်မှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ကျွန်တော့်ကိုဝမ်းနည်းစေတယ်၊ ​​ကူညီဖို့အချိန်မရဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခါတော့ငါ ISIS ထွက်လာတဲ့အခါဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာလောက်လှူမယ်လို့စီစဉ်ထားတယ်။
ငါ့မှာ Acer Aspire One ရှိတယ်။ ဘာ distro ကိုသင်အကြံပြုသလဲ။
ငါဟာ Lubuntu နဲ့အတူရှိနေခဲ့ပြီးအရာအားလုံးကိုသယ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်အားအချိန်ယူပြီးအချိန်ဖြုန်းတီးသည်အထိဇိမ်ကျကျနေခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာငါမသိ။
ငါ Lubuntu သည်ကောင်းသည့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ Openbox ကိုအခြေခံပြီး Crunchbang (Debian ကိုအခြေခံပြီး) လိုမျိုးစမ်းသုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်အားကောင်းတဲ့မှောင်မိုက်တဲ့ဘက်ကိုသွားပြီး Arch (ပိုအဆင့်မြင့်တဲ့သုံးစွဲသူများအတွက်ပါ) ကြိုးစားကြည့်ပါ။
Debian7တည်ငြိမ်မှုကိုအခြေခံသော MATE desktop နှင့်အကောင်းဆုံး Point ပျောက်ဆုံးသည်။ 🙂
nap to Reply
သင့်ရဲ့ထောက်ခံချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Point Linux သည်ကျွန်ုပ်၏ Dell mini တွင်စမ်းသပ်ပြီး၊ Silk သည် Ubuntu ထက်သာသည်။ သို့သော်ဤအရာသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်စပီကာများမှအသံကိုသင်သိလျှင်၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထိသည် Ubuntu 12 မှာလည်းအတူတူပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကို ၀ ယ်လိုက်တာနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်က W7 ကိုကျွန်တော်ဖယ်လိုက်တယ် (Linux ကို ၉၈ ကနေစပြီးသုံးခဲ့ပေမယ့်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါဘူး။ " အသုံးပြုသူကို)
ကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို Asus EEE PC netbook တွေအမြောက်အများ၊ အလွန်ကျိုးနွံစွာ၊ 700Mhz Celeron, 512 DDR2 RAM,4GB SSD disk နှင့် 7″ screen ကိုပေးခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်းတို၊ အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့ Debian LXDE ပါ။ သူတို့ကိုကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ပြီးကျေးလက်ကျောင်းတစ်ခုမှာပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းဘရော့ဘန်းကိုဝိုင်ဖိုင်နှင့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုများတပ်ဆင်ထားသည်။ ပစ္စည်းကိရိယာများကိုကွန်ပျူတာခန်းတွင်တပ်ဆင်ပြီး၎င်းမှာ HP laserjet ပရင်တာနှင့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ youtube ဗီဒီယိုများကြည့်ခြင်း (EEE PC ပရိုဆက်ဆာကြောင့်ဖြစ်သော) ပြtroubleနာအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် projector နှင့် voila တို့ဖြင့်အနည်းငယ်ပိုမိုအစွမ်းထက်သည့် pc ကိုတင်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ကကွန်ပြူတာများသည်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဘရောင်ဇာ (Chromium) ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်တစ်နှစ်လျှင်အကြိမ်အနည်းငယ်သာသွားသည်။ 5GB SSD တွင်အရာဝတ္ထုများအတွက် 4GB အခမဲ့သာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဗဟိုဆာဗာတွင်ဖိုင်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိုသဘောမျိုးဖြင့်အခြားဖြန့်ချိမှုများကိုနှစ်သက်လိုသောကြောင့် Debian ၏ဘက်စုံသုံးမှုသည် (သတိပြုပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Susero / Redhatero ၏နှလုံးသားဖြစ်သည်)
ငါမှတ်ချက်ပေးသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် lxde xfce desktops စသည်ဖြင့်များစွာသော distros များကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ငါ့ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သောတစ်ခုမှာ LUBUNTU ဖြစ်သည်။ ငါမယုံနိုင်စရာဟုထင်ခဲ့သည် တူညီသော desktop (xfce) သည်ကွဲပြားခြားနားစွာအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် netbook သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာများကိုအသုံးပြုသောအရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာရှိသည့်မည်သူမဆိုကျွန်ုပ် xfce ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်နောင်တမရပါ။
မင်္ဂလာပါ pansxo တွင်၊
သူတို့ကိုငါတကယ်မသိပေမယ့် Lubuntu က LXDE နဲ့ Xubuntu XFCE ကိုသုံးတယ်လို့ငါထင်တယ်။
ယူပီအက်စ်! LubDu ကိုအသုံးပြုသည် LubDu ကိုအသုံးပြုသည်
မှန်ပါတယ်၊ Lubuntu LXDE ကို run သည်။ 🙂
ကောင်းပြီ၊ လူကောင်းတွေ၊ ငါ Acer AsO AO250 netbook ရှိတယ်၊ ငါအောက်ပါအတိုင်း Linux mint xfce; xubuntu 12.04, မူလတန်း OS ။ အစောပိုင်းက ၁၂၈mb သုံးစွဲမှုနှင့်အတူမျက်စိပိတ်ထားသော mint သုံးခုသည်ယခုအချိန်ထိကျွန်ုပ်မှတ်ဥာဏ်နည်းပါးနေသည်။ ယခုဤရွေးချယ်စရာများဖြင့်ကျွန်ုပ် bug ကိုတိုး။ ဘိုဟီကိုကြိုးစားကြည့်မည် Ariki ကိုနှုတ်ဆက်သည်။
ငါ့ကိစ္စမှာတော့ Manjaro Xfce ကိုငါ့ရည်းစားရဲ့ netbook မှာတပ်လိုက်တယ်။ မင်းကပိုကြိုက်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ Trisquel themes များနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။ အမှန်တရားကတော့တည်ငြိမ်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူပါတယ်။ သူမကသူမ GNU / Linux ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းပြောခဲ့သည် ကျွန်ုပ်၌တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာဖန်သားပြင်တောက်ပမှုအတွက်သော့များသည်အလုပ်မလုပ်ခြင်းဖြစ်သည် (ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်ပို့စ်တွင်ဖြေရှင်းနည်းများကိုကြိုးစားခဲ့သော်လည်းမည်သည့်အရာမျှ) အရေးမကြီးပါ။
ငါ့နှမ၊ samsung netbook နှင့်အတူကျွန်ုပ်နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အလင်းရောင်နှင့်ပတ်သက်သောပြသနာများ၊ ပြbatteryနာမှာသင် laptop ကိုဘက်ထရီဖြင့်ဖွင့်သောအခါအလင်းချွေတာသည့်အနေဖြင့်ဖွင့်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့် တင်၍ မရပါ။ တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်မှာချိတ်ဆက်ထားသောပါဝါနှင့်ထပ်ဖွင့်ပါ၊ ထို့နောက်ဘက်ထရီဖြင့်အသုံးပြုပါ၊ ထို့ကြောင့်အလင်းကိုမြင့်မားစေပါသည်။
Hector Zelaya ဟုသူကပြောသည်
KDE နှင့်၎င်း၏ပလာစမာ - နက်ဘွတ်ခ်နှင့်လက်ျာလက်ယာသမားများမရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်စိတ်ထိခိုက်သည်။ ငါ Chakra ကိုသုံးတယ်။ တကယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမယ့် 2GB RAM နဲ့ပေါ့
Hector Zelaya အားပြန်ပြောပါ
... ကျနော့်အမြင်အရ ၁၀ လက်မမျက်နှာပြင်မှဖြစ်သောပလာစမာ - နက်ဘွတ်ခ်သည်လိုအပ်ပုံမရပါ။ Desktop (သို့) "Pc" mode မှာအားလုံးကြည့်ကောင်းပါတယ်။
Joli Cloud ကိုမကြာသေးမီကမှရပ်ဆိုင်းထားသည်မဟုတ်လော။ !
ငါသိတယ်မဟုတ် ဒီ site သည်တက်ကြွနေဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းကိုရပ်ဆိုင်းထားသည်ဟုမပြောပါ။
En http://jolios.org/ ကရပ်စဲခံရအကြောင်းကိုဘာမှမပြောပါဘူး ... ကောင်းပြီ ... ငါမသိရဘူး။
ငါ့နှမနဲ့ငါ netbook တွေရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကငါ Lubuntu ကိုတပ်ဆင်လိုက်တယ်။ သူမပြတင်းပေါက်တွေငြီးငွေ့လာတာကြောင့်သူမရဲ့စက်ကိုနှေးကွေးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြာသေးမီကသူမဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီး OS နှင့်ပရိုဂရမ်များသည်မြန်ဆန်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်းစွာပြုမူကြသည်။
လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည် netbook ပေါ်တွင် Debian + LXDE ကို install လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်။ မြန်လျင်မြန်၊ အကျိုးရှိစွာ၊ အပူချိန်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ Manjaro + LXDE (community version) ကိုကျွန်ုပ်မထည့်သွင်းမီ၎င်းသည်မှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်မီ၊ မောက်သည်အမြဲတမ်းပြတ်တောက်သွားပြီးအပူလွန်ကဲခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အပြောင်းအလဲသည်ကျွန်ုပ်နှင့်မကိုက်ညီပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ desktop PC နှင့် Debian ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Manjaro ကိုငါ PC မှာပဲအခွင့်အရေးတစ်ခုထပ်ပေးမယ်၊ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့တရားဝင် version ပါ။
Lubuntu သည်ရွေးချယ်စရာကောင်းသော်လည်းလက်ရှိ 13.10 တွင် Xscreensaver တွင်ကြီးမားသောပြproblemနာရှိနေပြီး၎င်းသည်၎င်းကိုယူဆောင်လာခြင်းမရှိဘဲ ၃ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်မျက်နှာပြင်မှေးမှိန်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ပျော်ရွှင်သော Xscreensaver ကိုတပ်ဆင်လျှင်တောင်မှ၊ အပြောင်းအလဲများကိုလျှောက်ထားပါ
Slitaz, 35 ကို MB
အလွန်ကောင်းသော entry ကို။
ဟေ့စိတ်မကောင်းပါ၊ သို့သော် Google Chrome OS link သည်မမှန်ပါ၊ Cr Os နှင့်ချိတ်ဆက်သည်၊ သူတို့အတူတူမဟုတ်ပါ
ငါမသိခဲ့ဘူးတွေအများကြီးရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် Bodhi Linux ။ ဒါတွေကိုကြိုးစားဖို့ဘယ်တော့မှမနာပါဘူး
ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်အတွက် lubuntu ကိုငါပိုနှစ်သက်တယ်၊ အဲဒါဟာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေတယ်😛
ကျွန်ုပ်၏ netbook သည် SUSE Linux 11 နှင့်အစပြုခဲ့သည်။ Compaq Mini CQ10-811LA၊ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကကျွန်ုပ်အား ၈၀၀ အကုန်အကျခံခဲ့သည်။ ငါပြောင်းလဲချင်သော်လည်း၊ အရံပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်ဘာတစ်ခုမှလုပ်ရန်စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါ၊ ငါ USB မှ boot မလုပ်နိုင်ပါ၊ ခဏတာကုန်သွားပြီးနောက်၊ UnetBooting တင်ပြီးသောအခါ၊ မည်သည့်သော့ကိုမဆိုနှိပ်ရလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ငါသာ boot လုပ်၍ EasyPeasy ကိုတပ်ဆင်သည်။ အဲဒါကအံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါလှည့်စားတာကိုတွေ့ပြီးတခြား distros တွေကိုစမ်းကြည့်နေတယ်။ ) ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့ wifi ကငါ့ကိုအသိမပေးဘူး၊ ငါကေဘယ်လ်ကိုသုံးရတယ်။
ငါငြီးငွေ့လာပြီး OpenSuse 12.2 KDE ကို install လုပ်လိုက်တယ်၊ အဲဒါဟာပျမ်းမျှပဲ၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မသက်သာဘူး။
ငါက Fuduntu ကိုတွေ့ပြီ။ ငါအရမ်းချစ်တယ်၊ အရာရာတိုင်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဘက်ထရီကကြာရှည်ခံတယ်၊ trackpack ကအရမ်းတိကျတယ်၊ LibreOffice ကဖော်ရွေတဲ့ရင်းမြစ်တွေယူလာတယ်။ ဒါပေမယ့်စီမံကိန်းပြီးသွားပြီ။ liking (Kubuntu, Lubuntu, Linux Mint, Puppy, OpenSuse) ငါ Win7 ကို install လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
Lubuntu ကို netbook ပေါ်မှာ partition တစ်ခုထဲမှာတပ်ဆင်ပြီး Fuduntu ကငါ့ကိုပေးတဲ့ခံစားချက်ကိုရှာမတွေ့မချင်းတခြားသူတွေကိုဆက်ပြီးကြိုးစားကြည့်တော့မယ်။
ရှေ့တွင်! သငျသညျကြိုးစားနေစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည် ... 🙂
ကောင်းပြီ ... ငါရေးနေတဲ့ဒီ netbook ကိုအများကြီးသုံးတယ်။ ၁.၆ Ghz နှင့် 64 Gb RAM Intel Atom 1,6-bits ငါ debian နဲ့အမြဲတမ်းနေခဲ့ရတယ်။ ပထမတော့သူကမသင့်တော်ဘူးဆိုတာသိပေမယ့်လည်း KADE ကို wheezy -kernel2နဲ့ kde 3.2- အပေါ်မှာထားခဲ့တယ်။ ငါလမ်းလျှောက်တယ် လင်းပိုင်သင်သုံးပြီး ၄ စက္ကန့်သို့မဟုတ် ၄ စက္ကန့်လောက်ကြာသည်။ ဟုတ်ကဲ့ ... ပြီးတော့ချောချောမွေ့မွေ့သွားသည်။ Icewesel သည် ၁၀ စက္ကန့်ခန့်ကြာမြင့်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ဗားရှင်း ၂၇ ကတည်းက web ပေါ်တွင်တင်ခြင်းသည်အလွန်မြန်ဆန်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ပရိုဆက်ဆာခွင့်ပြုသည်ထက်ပိုမိုမြန်သည်ကိုပြသည်။ ငါ java နဲ့ clementine ကိုသုံးတယ်။ KADE မှာပွင့်နေတယ်။ ၁.၆ မကကျော်တယ်။ libreoffice နဲ့လည်းမေ့သွားတယ်။
ယခုတွင်သင့်တွင် debian sid -kernel 3.12 နှင့် kde 4.11- ရှိပြီးမကြာခဏဖြစ်ခဲ့သည့်အရာများအားလုံးသည်ထက်ဝက်မျှကျဆင်းသွားသည်။
ကိုယ်ကျင့်တရား - ပိုမိုပေါ့ပါးသော desktop (lxde, သို့မဟုတ်သင် openbox ကိုသာလိုချင်လျှင်) java သို့မဟုတ် design ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအသုံးပြုသော browser များ၊ offimatics များကဲ့သို့ application များကိုတားဆီးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့်၊2Gb ram ရှိလျှင်အဓိကပြmajorနာများမရှိဘဲအလွယ်တကူ kde သို့မဟုတ် gnome ကိုထည့်နိုင်သည် (gnome သည်ပိုမိုစားသုံးသည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်အနည်းငယ်ကြိုးစားခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ) ။
ဒါကကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံပါ။ net တွင်ရေးသားထားသည့် arch တွင်ကောင်းမွန်သော kernel တစ်ခုရှိခဲ့လျှင်၊ ငါ deb ၌မြင်ခဲ့ပြီး ၃၂ bits သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်စစ်ဆင်ရေးကိုကူညီနိုင်လျှင်၎င်းသည် distro နှင့်သင်၏ desktop ကိုမဟုတ်ပါ။
ငါနောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်မေ့လျော့။ ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်အပူချိန်သည် ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်မပိုသော ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ဘက်ထရီကအစမှာသုံးသကဲ့သို့ငါထက်ပိုပြီးသုံးနာရီကြာနေတယ်။ သူတို့အားအမှုအရာအပေါ်ပြproblemနာမရှိပါ။ အဆိုပါစီမံခန့်ခွဲမှုကယ့်ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပုံရသည် !!
ငါဆောင်းပါးအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Manjaro နှင့် ChromOS မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်မသိသောဖြန့်ဝေမှုအများစုသည် သူတို့ကိုငါ virtual machine လိုမျိုးစမ်းသပ်ကြည့်မယ်။
တစ် ဦး က salu2!
ကောင်းတယ် ဒါကစိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်။ အသစ်သော distros များကြိုးစားရန်သူတို့ကိုအားပေးပါ။ 🙂
ငါ netbooks သို့မဟုတ် cruchbang သို့မဟုတ် Archbang နှစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေပါ။
ငါ့အတွက် Archbang ဟာကမ္ဘာနှစ်ခုလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးကိုပေါင်းစပ်ထားတယ်။ ဒါဟာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါ။ ငါအကောင်းဆုံး (အလင်း) distros တ ဦး တည်းဟုပြောဝံ့လိမ့်မယ်။
Diego Garcia ဟုသူကပြောသည်
ငါပေါ့ပေါ့ပါးပါးထင်သောကြောင့်, ငါ၏ HP က G42 ပေါင်ပေါ်မှာ linux ပူစီနံကို install ...
netbook ပေါ်ရှိ elementaryOS သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။ မသန်စွမ်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ အရိပ်များနှင့်အရာအားလုံးပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းသည်လှပနေဆဲဖြစ်သည်။ အမှန်တရားမှာ miniMac ကဲ့သို့ (ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိပါ) သို့သော်အသုံးဝင်သော
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါကို Vala မှာရေးထားတာနီးပါးကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
PC နဲ့ Chrome OS အတွက် Android ကိုစမ်းသုံးဖို့ကျွန်တော်မေ့နေခဲ့တယ်။
စုစည်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏ hp mini ၏ hard drive မီးလောင်သွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် distros များကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်၊ အများစုမှာ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုနှင့်ရှုံးနိမ့်ပြီး pendrive မှ booting လုပ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့တယ်။ wifislax နဲ့ ၁၀၀% အလုပ်လုပ်ပေမယ့်ပွင့်လင်းတဲ့ရုံးမရှိ၊ အခမဲ့ရုံးဖွင့်တဲ့ wifislax၊ ဇွဲရှိတာကိုကျွန်တော်နားမလည်ပေမယ့်ဇွဲရှိရှိနဲ့အပြောင်းအလဲကိုလိုချင်ရင်အပြောင်းအလဲကိုလိုချင်ရင် အနာဂတ်အစည်းအဝေးများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသလား အင်တာနက်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။
ငါဒီမှာဖော်ပြထားသောသူအပေါင်းတို့ကြိုးစားပါ, နှုတ်ခွန်းဆက်သ, ရှေ့ဆက်သွားနှင့်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Wilson Cortegana ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့အဖြေပေးမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်၊ ကောင်းပါပြီ။ ကျွန်ုပ်မှာ Samsung N102SP netbook ရှိသည်၊ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Ubuntu 13.10 ကို install လုပ်ခဲ့ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ကျွန်ုပ်စိတ်ပျက်မိသည် (တကယ်နှေးကွေးသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် windows7 ထက်ပိုပြီး) ယခုဖြစ်သည်။ ဒီဖြန့်ကျက်မှုအကြောင်းငါ့ကိုအကြောင်းကြား, ငါပိုသင့်လျော်သောပါလိမ့်မယ်သိလိုပါတယ်။
Wilson Cortegana ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ linuxmint 16 ကို xfce desktop နဲ့အကြံပေးလိုပါတယ်။ ၎င်းသည်အပေါ့ဆုံးနှင့်အရှိဆုံးအရည်ကွန်ပျူတာများအနက်တစ်ခုနှင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်ထားသည်။ အကယ်စင်စစ်ဒီ distro သင်တို့ကိုစိတ်ပျက်စေပါဘူး။ ကံ
ငါ့မှာ netbook လည်းရှိတယ်၊ ငါ CrunchBang 11 ကို install လုပ်တယ်။ သူက network card မှာမင်းကိုမသိဘူး (ဒါမှမဟုတ်ပြproblemနာတခုရှိတယ်)၊ ပြီးတော့ငါ Lubuntu ကို install လုပ်တယ်၊ ဒရိုင်ဘာတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရတယ်။ ယခုတွင်ငါသည် Elementary OS ကိုရွေးချယ်ပြီးဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဒီမှာအသစ်ဖြစ်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်စာဖတ်ခြင်းနှင့်မှတ်ချက်အချို့ကိုဖတ်ရှုပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ netbook အတွက် distro ကိုအကြံပြုလိုပါသည်။ ၎င်းသည် Intel atom n2 ပရိုဆက်ဆာ၊ 570gb DDR1 RAM၊ Windows3ပါသော Packard Bell dot se7 ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင့်ကိုကူညီပါမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်အသင့်တော်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရာတွင်အခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ netbook ပြwithနာသည်အခြေခံအားဖြင့်နှေးကွေးနေသည်။ အစီအစဉ်များနှင့်ဝဘ်စာမျက်နှာများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အဆက်မပြတ်မှီဝဲ။
ငါ linuxmint 16 x86 ကို xfce desktop နဲ့အကြံပေးလိုပါတယ်။ အလားတူအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ netbook အပေါ်စမ်းသပ်ပြီး။
elementoriOS ကိုစမ်းကြည့်ပြီး Midori ကို Chromium ဖြင့်အစားထိုးပါ။ ပျံသန်း!
အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပံ့ပိုးမှု, ငါ 1GB RAM ကိုမှတ်စုစာအုပ်အပေါ် Lubuntu ကိုစမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။
Psdt: သင်သည် distn 50 MB သာရှိသော distn Damn Small Linux ကိုထည့်နိုင်သည်။ ရွှင်လန်း!
50 နှစ်အရွယ်ပရိုဆက်ဆာနှင့် 2GB (တိုးချဲ့) ပါသည့် Toshiba NB4 အတွက်အဘယ်နည်း distro ကိုသင်အကြံပြုသနည်း။
၎င်းသည် Chrome OS ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်မည်သို့စတင်ဖွင့်ရမည်နည်း။
ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့် netbook (Toshiba NB250) လေးနှစ်ပြည့်ပြီးစူပါအေးမြသည့် Intel Atom ပရိုဆက်ဆာနှင့် Point Linux သည်အဆင်ပြေမည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။
Salamdreate နှင့် salamander ဆိတ်သငယ်ကို salamander salamander နှင့်ငါသင် salamander 92.4am salamander သင်အကြံပြု salamander သင် salamander ကြောင်း salamander
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည် Linux နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးကိုလေ့လာခဲ့သည်။ Windows user တစ်ယောက်အနေနှင့်၎င်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်စိတ်မ ၀ င်စားခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ပြီးအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်စကြဝuniverseာကိုစတင်အသုံးပြုရန်အထူးသဖြင့်ရှာဖွေလိုသည်။ အထူးသဖြင့်လူသား၏ကောင်းကျိုးအတွက်ဗဟုသုတများမျှဝေခြင်း၏ဤသဘောတရား၏လူ့သဘောသဘာဝကြောင့်ကမ်းလှမ်းသောဖြစ်နိုင်ချေအမြောက်အများရှိသည်။ ထည့် ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ 1gb ram netbook နှင့် 1.6GHz mono core ပရိုဆက်ဆာအတွက်ဘာအကြံပေးချင်ပါသလဲ။ ငါ ELementary OS ကိုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
Elementary Os သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကသင့် hardware အတွက်အဲဒါကို lxde သို့မဟုတ် xfce လိုအခြား Desktop တွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ Desktop ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါကိုအကောင်းဆုံးရွေးစရာလို့ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်ရှုထောင့်ကိုဂရုမစိုက်ပါက lxde desktop နှင့်အတူကျွန်ုပ် lubuntu ကိုအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်အထိကြိုးစားခဲ့သမျှအပေါ့ဆုံးဖြစ်သည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲအနည်းအကျဉ်းသာရှိသောစက်များသို့မဟုတ်ဒုတိယရွေးချယ်စရာအဖြစ်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသော်လည်း xfce desktop ရှိပထမ linuxmint ထက် ပို၍ တောင်းဆိုရန်ခက်ခဲသည်။ lxde ထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပေမယ့်လိုအပ်ချက်တွေထပ်ပြီးတောင်းဆိုတာကိုငါထပ်ခါတလဲလဲလုပ်တယ်။ မင်းကံကောင်းမယ်လို့ငါတို့မျှော်လင့်တယ်။
ဟိုဆေးဂျေ Gascon ဟုသူကပြောသည်
Debint, Android စသည်တို့မှ Mint မှ Netbook တွင် linux ဖြန့်ဝေမှုများစွာကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် desktop brightness နှင့်ပြaနာရှိခဲ့သည်။ Linux Ultimate Edition 3.8 ကိုမကြိုးစားမှီတိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ http://ultimateedition.info/၎င်းသည်မြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးသင် Mate desktop ကိုမနှစ်သက်ပါက terminal sudo apt-get install gnome ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ gnome desktop ကို install လုပ်ခြင်း၊ gnome fallback နှင့် gnome fallback လေယာဉ်မရှိ gimmicks နှင့် gnome 3၊ သာမန် application အဖြစ်လာပြီးအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူစေသော Xbmc အပြင်စည်းလုံးမှုသည်သင်လိုချင်သောအိမ်ဖျော်ဖြေရေးစင်တာအတွက် Xbmc ဖြစ်ပါကသင်၌ကမ္ဘာနှစ်ခုရှိသည်။ သင်သည် xbmc ကိုပျင်းမည်ဆိုလျှင်သင်အားလုံးကိုသုံးနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့်ကွန်ပျူတာ၏စွမ်းအားကိုအဆုံးမဲ့ချိန်ညှိနိုင်သည်။
ငါ Gateway LT4002m netbook ပေါ်မှာ run နေတယ်၊ ​​အမှားမှားပြီးနောက်ဆုံးထုတ်ကုန် 3.8 amd64 ကိုသွင်းလိုက်တယ်။ netbook က 32 bit နဲ့ပြီးပြည့်စုံတယ်။
Jose J Gascon အားပြန်ပြောပါ
Celso mazariegos ဟုသူကပြောသည်
လောလောဆယ်ကျွန်တော့်လက်တော့ပ်မှာ Xubunto 10.2 ကိုအသုံးပြုပါတယ်။
LUBUNTU-14.04 ကိုအကြံပေးပါမယ်။ ငါဘယ်လိုပြေးတယ်ဆိုတာကြည့်မယ်
Celso Mazariegos အားပြန်ပြောပါ
ငါ Linux Mint 17 Mate ကိုသုံးတယ်။
ကျွန်တော် Chrome OS ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သူက package နဲ့ install လုပ်စရာမလိုပဲ navigate လုပ်ဖို့နဲ့ဘာမှမလုပ်ပဲကတည်းက ...
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Debian SID ကို အခြေခံ၍ အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာရှိသောကွန်ပျူတာများအတွက် Xanadu Linux ဟုခေါ်သောဖြန့်ဖြူးမှုကိုတီထွင်နေသည်။ ၎င်းသည်စမ်းသပ်ဆဲဖြစ်ပြီးသင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုတင်ပြလိုပါက၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာလက်ခံပါလိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသောလိပ်စာမှာ ဘယ်မှာကူးယူနိုင်တယ် https://xanadulinux.wordpress.com/
အိုကေ ငါကြိုးစားကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အကယ်၍ သူတို့ကလက်တော့ပ်ကိုအပူမပေးသောဖြန့်ဖြူးမှုကိုလုပ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖြန့်ချိရေး Haha ဖြစ်လိမ့်မည်
Dennis L. သို့ပြန်သွားရန်
ကောင်းပြီ၊ ငါ့မှာ HP အတော်အသင့်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် hp elitebook 6930p ဖြစ်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး Windows နှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မတူညီသော Linux ဖြန့်ချိမှုများနှင့်ကြိုးစားရာတွင် Fedora, Linux Mint, Ubuntu, Xubuntu, Kali, Elementary, Debian , နှင့်အတူတူပင်ရလဒ်အတူရလဒ်များနှင့်အတူ, Laptop ကိုအရမ်းပူလာတယ်။ ဒါဟာထူးဆန်းတယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Windows နှင့်အတူဤသည်ဖြစ်ပျက်မဟုတ်ခဲ့, ငါက partition ကို install လုပ်ပြီးကတည်းကကြောင့်ဖြစ်ပျက်ပါဘူး။ မည်သူကိုမဆိုဤဖြန့်ဝေမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်မည်သည့်ဖြန့်ဖြူးမှုမျိုးကိုမဆိုသိသည်။ ငါကြိုးစားပြီးစမ်းသပ်ဖို့ငြီးငွေ့ပြီးပြီ။ ဖြန့်ဝေသူအားလုံးနှင့်အတူတူပါပဲ။ မည်သည့်အကူအညီမဆို ??
ထိုအခါ lubuntu နှင့်အခြားသူများထက်များစွာသာလွန်ကောင်းမွန်သော lxle တွင် LXLE ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကကောင်းလိမ့်မည် http://lxle.net/
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကငါမှာကွန်ပျူတာမရှိဘူး။ ၁.၆၆ GHz netbook ပဲ၊ DDR1.66 RAM 1 GB လောက်ပဲရှိတယ်။ ရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုအရ "စင်ကြယ်တဲ့" arch linux, manjaro နှင့် crunchbang အကြားမည်မျှကွာခြားမှုရှိမည်နည်း။
Elive အကြောင်းဘယ်သူမှမပြောဘူး ???
#! ပို့မည် ...
crunchbang သံသယမရှိဘဲအကောင်းဆုံးရဲ့အကောင်းဆုံး ....
အကောင်းဆုံးကတော့ကျွနု်ပ်ကိုတပ်ဆင်လိုက်ပြီး USB ထဲကိုကူးထည့်လိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော် PC တော်တော်များများမှာ boot လုပ်နိုင်တယ်။ Thinkpad T43 မှာကျွန်တော်သုံးတယ်။
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်၊ ငါ mintosx ရှိတယ်။ သူက linux ထဲမှာ 64 bit နဲ့ win7ထက်ပိုကောင်းတယ်။ windows အမြောက်အများကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့ ၂၀၁၄.၁ မှာနက်တယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီးဘယ်တစ်ခုသုံးသင့်လဲ ငါ linux distro ကိုရှာနေပါတယ်
လွယ်ကူစွာ၊ အထူးသဖြင့်မှတ်ဥာဏ် ၄၀၀ မပြည့်သောကွန်ပျူတာများအတွက်ဖြစ်သည်
မင်္ဂလာပါကောင်းပါ၏။ နိမ့်ကျသောသတ်မှတ်ထားသောစက်များအတွက်အလင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွေ့ခဲ့ရပြီး Ubuntu နှင့် "cacharrie" တို့ကိုယခုငါမလုပ်နိုင်သောအချိန်တွင်အလောင်းအစားလုပ်ခဲ့သည့်အချိန်လည်းရှိခဲ့သည်။ ဒါကပြlittleနာနည်းနည်းလေးကိုဖြေရှင်းဖို့တွန့်ဆုတ်နေမှာကိုကြောက်လို့အဲဒါတွေထဲကတစ်ခုကိုထည့်မထားပါဘူး။
Lionofsnow Aterrazombies ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါမှာ Eighth Window နှင့် Zorin9ရှိတယ်။ ဒါ့အပြင် ReactOs လို့ခေါ်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ OS တစ်ခုကို download လုပ်တယ်။ ကံမကောင်းတာက "live cd" ဟာ hardware နဲ့တစ်ခုခုလုပ်နေတုန်းအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဆက်ရှိနေပြီးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ install မလုပ်နိုင်ဘူး (အဆင်ပြေပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ပဲ) ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ဒီ OS ကိုပေးနိုင်မလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Lionofsnow Aterrazombies အားပြန်ကြားပါ
ဒုတိယ Acer Aspire One D257 (Intel Atom ပရိုဆက်ဆာ၊2Gb Ram နှင့် 500 Gb hard disk) အသုံးပြုသောအတွေ့အကြုံမှာ Live CD ဖြင့် Fedora 21 ကိုစမ်းသပ်သည့်အခါ၎င်းသည်ကီးဘုတ်ကိုမသိရှိနိုင်ခြင်း၊ ဒါကြောင့် Ubuntu 14.10 ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ကီးဘုတ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် Wifi မှာပြproblemsနာမရှိခဲ့ဘူး။ စပိန်အတွက်သာအထောက်အပံ့ပေးခဲ့ရတယ်။ ဒီ post ရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ငါ Ubuntu ကိုဖျက်ပြီး Lubuntu 14.10 ကို install လုပ်ခဲ့တယ်။ Wifi၊ keyboard (အထောက်အပံ့ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းတပ်ဆင်ရမယ်) ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးလျင်မြန်စွာ log in လုပ်ပြီး YouTube ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင်အရာရာအဆင်ပြေနေသည်။
ဟဲလို၊ ဒီစက်အတွက်ဘယ် operating system ကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်
inteel gma3600 display driver
2600GHz × 1.60 Intel® Atom ™ CPU N4
x64 နှင့် x86 ကိုထောက်ပံ့သည်
Linux ၏အဆိုအရ၎င်းအသုံးပြုသောဂရပ်ဖစ်ဒရိုင်ဘာမှာ PowerVR SGX545 ဖြစ်သည်
fedora x64 က gnome3 ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပေးတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာ၊ အလွန်ကောင်းပါတယ်
ဒီစက်နဲ့အတူလမ်းလျှောက်တဲ့သူကိုငါကြိုက်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂရပ်ဖစ်ဘာသာရပ်ကတကယ်ကိုကျွန်ုပ်ကို fuck ဆိုတဲ့ကြောင့်
ဆောင်းပါးသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ငါပြတင်းပေါက်မှလာသည်။ Linux လောကရှိ Ubuntu တွင်ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းကိုလှမ်းလိုက်သည်။ ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်သည်သတင်းအချက်အလက်ကိုသာရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သောပြproblemsနာများဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် desdelinux တွင်၎င်းတို့ယူသောအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားသည်။
ရပါတယ်! ဖက်သည်! ရှင်ပေါလု။
ငါ crunchbang ကို 2gb da ram ပါတဲ့ hp mini 110 မှာ ၂ နှစ်လောက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးအမြန်ဆုံး၊ တိုတယ်၊ တည်မြဲတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည် bluetooth အတွက်ထိုစက်ပေါ်ရှိ windows7သို့ပြန်သွားခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်လုပ်ရမည့်အလုပ်မှာပြီးဆုံးသွားပြီ။ ထို့ကြောင့် CB သို့မဟုတ်ထိုထက်မကမြန်သောဖြန့်ဖြူးမှုကိုငါမြင်နေသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်အားခွင့်ပြုသည်။ လတ်တလော ...
netbook ကမေးလ်ကိုစစ်ဆေးရန်သို့မဟုတ်ချက်တင်စကားပြောရန်သာဖြစ်သည်ဟုဆိုသော်လည်းအမှားအယွင်းရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ CB ၌၎င်းကိုအသုံးပြုစဉ်အတွင်းထိုစက်ငယ်သည် (ပရိုဆက်ဆာခွင့်ပြုသလောက်) အရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မာလ်တီမီဒီယာစင်တာ၊ ရင်းမြစ် ၀ င်ငွေ၊ ကျွန်ုပ်၏ fapmachine …အရာအားလုံး!
ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့သလိုပဲ CB ကနည်းနည်းဟောင်းနေပြီ၊ ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့ပေမဲ့ပိုပြီးခေတ်မီတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုငါရှာနေတယ်။
ငါဆောင်းပါး, operating system အားလုံးအပေါ်အသေးစိတ်နှင့်အတူဖြည့်စွက်သော။ ကိုယ်ပိုင်အချက်အနေဖြင့် Notebooks တွင် RAM နည်းပါးသောကြောင့် Ubuntu သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ဖော်ရွေသောမျက်နှာပြင်ရှိပြီးအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ အခြားလည်ပတ်ရေးစနစ်များနှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်၎င်း၏ထိပ်တန်း application အားလုံးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
သူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တွင် Dell Inspiron Mini 10V ရှိပြီး၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တွင် xPud ထည့်သွင်းထားပြီး၎င်းသည် "ကောင်းသည်" ဖြစ်သော်လည်း "ယာယီ" စနစ်ဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမျှတပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိ၍ အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုတပ်ဆင်။ မရပါ။ ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ Dell Inspiron Mini 10V netbook အတွက်ဘယ်ဟာကိုသင်အကြံပြုသလဲ။ ရွှင်လန်း!
အကြံပြုချက် - မှတ်စု၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အညီ၊ ၂ ခု၊ အကောင်းဆုံးအနေဖြင့်အကြံပြုပါ၊ ၂ သည်အပ္ပတ်ဖြစ်စေ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သို့မဟုတ် package များကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်ဝက်ဘ်များ၊ html, php စသည်တို့နှင့်တည်းဖြတ်နိုင်သည့်အချို့သောဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာများကိုအကြံပြုပါ။ ငါဂရုစိုက်ရတယ်၊ xPud မှာငါ Photoshop နဲ့ဆင်တူတဲ့ image editor တစ်ခုကို install လုပ်တယ်။ ရွှင်လန်း!
ငါဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ distros တွေကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့ကကောင်းတယ်။ JoliOS ကိုငါစမ်းကြည့်ဖို့လိုတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့ကိုအရမ်းဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့အခုငါပြောပြမယ်၊ ငါ opensuse ကိုအမြဲတမ်းသုံးလေ့ရှိတယ်၊
ငါ chromebook ကိုသုံးသည်။ ၎င်းသည် chrome OS ကိုယူဆောင်လာသည်။ အဆင်ပြေသည်၊ ၎င်းသည်မြန်ဆန်သော browser တစ်ခုဖြစ်သည်၊ အော့ဖ်လိုင်းအပလီကေးရှင်းများမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ default ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည် OS ကိုအခြားတစ်ခုအတွက်ပြောင်းလဲရန်ကြောက်ရွံ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ထပ်မံ၍ စတင်မည်မဟုတ်ပါ၊ ဤဟာ့ဒ်ဝဲကိုမည်သို့ပြောင်းလဲမည်သို့မဟုတ်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ဆိုသောသင်ခန်းစာများမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
ကွန်ပြူတာပေါ်တွင်၊ ဥပမာမီးဖိုချောင်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ ရေချိုးခန်းတွင်သော်လည်းကောင်း၊ in ည့်ခန်းရှိတီဗီဘေးတွင်ရှိပါကသင်စမ်းကြည့်ပါ။ နေသမျှကာလပတ်လုံး wifi ရှိသကဲ့သို့, သူကအရာအားလုံးအဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်။
ကျွန်ုပ်တွင် Acer Aspire 3756z Laptop၊ ၁၅.၆ မျက်နှာပြင်၊ 15.6GB RAM၊ Intel Pentiun dual-core T4 4200 Gz ပရိုဆက်ဆာ၊ ၃၀၀ GB GB hard drive ။ ဘယ် Linux ဖြန့်ချိမှုကိုသင်ထောက်ခံသလဲ။
opensuse XD ငါအမြဲတမ်းအကြံပေးသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ Ubunku, Kubuntu, Fedora, mmm စသည်တို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်မှာ GNOME desktop နှင့်သင်အကြံပြုသော်လည်းကျွန်ုပ်စက်တွင် KDE ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ အရေးတကြီးလိုအပ်သည်၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကမည်သည့် operating systems များအားလုံးကိုရိုးရာပရိုဂရမ်များ ၀ င်းဒိုးကဲ့သို့ install လုပ်နိုင်သည်ကိုပြောပြပါ !!!!!!!!!!
လူတိုင်း။ Window အတွက်အခန်းကန့်တစ်ခုနှင့် linux distro အတွက်တိုးချဲ့ထားသောအပိုင်းတစ်ခုကိုသာဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်။ Ubuntu သည် dual boot အရအရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ငါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ငါ ၂ နာရီအတွင်း Linux လုံလုံလောက်လောက်ရခဲ့တာ၊ ငါ distros (ubuntu နဲ့ fedora) တွေအများကြီးသုံးခဲ့တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုရူးသွပ်စေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ငါတပ်ဆင်ချင်သမျှအတွက် အခြားအရာတစ်ခုကိုအရင် download လုပ်ပါ။ အခြား OS များတွင်ကျွန်တော်တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသော windows ၏အင်္ဂါရပ်တစ်ခုသည် program တစ်ခု install လုပ်ရန်လွယ်ကူခြင်းဖြစ်သည်။
ငါ acer 2gh နှင့် 2gb သိုး၊ 32gb eMMC နှင့်အတူကြိုးစားသည်။ ၀ င်းဒိုးများနှင့်အဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်အင်တာနက် browser တွင်ပုံမှန်ထိခိုက်မှုများရှိတတ်သည်။ ကျွန်ုပ်၌အထူးတိုင်ကြားချက်မရှိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် windows standard များနှင့်မတူသောကွဲပြားသောထိတွေ့မှုပေးသော linux ကိုရွေးချယ်လိုသည်။
အကယ်၍ အဆင့်မြင့်သူတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုနိမ့်ဆုံးနှင့်အညီပြောင်းလဲနိုင်သော operating system ကိုအကြံပြုနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်သည် win8.1 ကိုဆက်လုပ်ပါမည်။
JoseV ။ ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ငါဟာမင်းရဲ့ Windows နဲ့အတူနေဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ လေးစားစွာဖြင့်သင်တို့အား ev ၀ ံဂေလိတရားဟောပြောရန် (သို့) မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကိုသရုပ်ဖော်ဖို့ဘာမှမတောင်းဆိုပါ။ သင်၏ထင်မြင်ချက်သည်သင် Linux အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းပြသသည်။ အသေးစိတ်ကတော့ဤအရာကိုသင်လိုချင်သည်ဖြစ်စေမုန်းသည်ဖြစ်စေမုန်းသည်။ သင်လိုချင်ပါကမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်မည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း၊ သင်ယူခြင်း၏စိန်ခေါ်မှုများကိုသင်မလုပ်လျှင်သင်ရှာဖွေလိမ့်မည်။ သင်အတွက်မဟုတ်ပါ။ ငါ Linux ကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှစ၍ desktop ပေါ်မှာသီးသန့်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် ၀ င်းဒိုးဖုန်းနှင့်အန်းဒရွိုက် (သူမသည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအသုံးပြုသည်) အသုံးပြုသော Dell mini ရှိပြီးကျွန်ုပ်လိုအပ်ချက်အရတစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းကိုမှားယွင်းစွာမယူပါနှင့်။ သင်ကသင်လိုချင်ပါက၎င်းကိုသင်မည်သို့သိနိုင်မည်ကိုရှာဖွေပြီးသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သင်လက်ခံရပါလိမ့်မည်။
အရမ်းကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်း၊ မင်းကို lor zorin ကိုငါစမ်းကြည့်တော့မယ်၊ ငါ့ mini laptop မှာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာငါသိလိမ့်မယ်
… .It ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိတော့ပါ။
Edgar Ilasaca Aquima ဟုသူကပြောသည်
မင်းရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုဖတ်နေတယ်၊ ​​ငါ့ရဲ့အဓိကအခက်အခဲက 1010 GB ရှိတဲ့ HP pavilion dv2la AMD Athlon ရှိတယ်၊ လက်တော့ဘက်ထရီရဲ့သုံးစွဲမှုဖြစ်တယ်၊ တစ်နာရီကျော်ကြာခံတယ်၊ ငါလက်ရှိ CUB Linux ကိုသုံးနေတယ် (Ubuntu) Chrome OS အသွင်အပြင်နှင့်အတူ) သို့သော်မည်သည့်ဖြန့်ဖြူးမှုသည်ဘက်ထရီစားသုံးမှုတွင်အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုသိလိုပါကဖြစ်နိုင်လျှင်ပရိုဆက်ဆာအမျိုးအစားသည် distro ၏လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မည်မျှသက်ရောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြပါ။
Edgar Ilasaca Aquima သို့ပြန်သွားပါ
Jose Vega ဟုသူကပြောသည်
ဘာလို့လဲဆိုတော့မကြာသေးမီကကျွန်တော်သူတို့ကို download လုပ်ထားသောဗားရှင်းများစွာကိုကြိုးစားပြီး disks တွေမကုန်မှီတိုင်အောင်သူတို့ကိုလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်၊ ထို့နောက် usb ထဲ၌ထည့်လိုက်သည်။ hp 1100 netbook အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် 1 gb ram ရှိသည့် netbook အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့တာကတော့ Elementary (elementary-os-freya-32-bit-multi-ubu), ubuntu netbook edition (ubuntu-netbook-edition-10.10)၊ ဒါပေမယ့်အထောက်အပံ့ကိုရပ်ဆိုင်းထားပြီးပြီ။ linux-2016.2-i386) အရမ်းတော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကသူ့ရဲ့ကိရိယာအားလုံးကိုအသုံးမပြုခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှာငါ Pepermint (Peppermint-7-20160616-i386) နဲ့ကျွန်တော်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကဒ်ကိုအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့သူနဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ မူလတန်းနည်းနည်းနှေးကွေးခဲ့ပေမယ့်ခြုံငုံစွမ်းဆောင်ရည်မဆို distro အပေါ်ကောင်းလှ၏။
Jose Vega ကိုပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးပြု၍ ငါ့ကို5dd Laptop အတွက် dell i6 350gb ram အတွက်အကောင်းဆုံး linux ရွေးစရာကိုပြောပြပါ
ဟယ်လိုကျွန်ုပ်မေးမြန်းချက်တစ်ခု ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန် Linux အသုံးပြုသူမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် XP ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သော (၁၀ နှစ်နီးပါး) netbook အဟောင်းရှိသော်လည်း disk မီးလောင်ခဲ့သည်။ ယခုငါအချို့သောကွန်ယက်ကိုလှိုင်းလှန်ဖို့ကအသုံးပြုရန်အချို့ OS ကို install လုပ်ချင်တယ်။ (အတိအကျပြောရရင် ၇၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော့်အဘိုးအိုကအဲဒါကိုသုံးမှာဖြစ်ပြီးသူကအီးမေးလ်တွေအတွက်သာသုံးမယ်၊ သတင်းစာတွေဖတ်မယ်၊ ထူးဆန်းတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရေးမယ်။ )
ဒီမှာအကြံပြုထားတဲ့ Lubuntu ကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ Grub bootloader installation ပျက်နေတယ်ဆိုတဲ့ error message မရောက်မချင်းတော့ကောင်းတယ်။
အခုတော့ OS ရှိနေပြီ။ ငါဘယ်လိုလုပ်အောင်လုပ်ရမှန်းမသိဘူး ...
ယခုစုံစမ်းမှု။ Lubuntu သည်ထိုကဲ့သို့သောစက်ဟောင်းကိုအသုံးပြုမည်လား။ ပေါ့ပါးပြီးဖော်ရွေသောအခြား distro တစ်ခုကိုသင်အကြံပြုပါသလား။
ကွန်ယက်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများမှာ - HP Mini 110-1020la Netbook၊ Intel Atom N270 ပရိုဆက်ဆာ (1.60 GHz), 1GB DDR2 မှတ်ဉာဏ်၊ ၁၀.၁″ WSVGA မျက်နှာပြင်၊ 10.1GB Hard Drive၊ 160b / g ကွန်ယက်၊ Windows XP Home SP802.11 ။
အလွန်ကောင်းသော post ကို! ငါဖတ်အချို့ကိုကြိုးစားပါနှင့်ဤ website ၏သူတို့ကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မယ်: https://andro2id.com/mejores-distribuciones-linux-ligeras/
ငါ linux distros များကိုအာဂျင်တီးနားအစိုးရမှ ၃၅၅ netbook နှင့် 355g သိုးထည်ဖြင့်ကြိုးစား။ ငြီးငွေ့လာသည်။ 2g နှင့်အတူ x ထပ်ပေါင်းခဲ့သည်။ အစိုင်အခဲမြန်နှုန်း၊ တည်ငြိမ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သော distro နှင့်ယာဉ်မောင်းသူအားလုံး၌ point linux mate 1 ရှိသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပိုက်တစ်ခုသည်အရာဝတ္ထုတစ်ခုလုံးမှာချောချောမွေ့မွေ့တည်ငြိမ်ပြီး facebook ရှိ music player နှင့် firefox နှင့်အတူသုံးစွဲသည်။ ကွန်ပျူတာမော်နီတာ၏အဆိုအရ wi-fi နှင့်သင်ထားရှိသောအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဤစက်အမျိုးအစားတွင် debian ကို အခြေခံ၍ အကောင်းဆုံး distro …။
jose luis gomez အားပြန်ပြောပါ
အပိုင်းနှစ် Debian Testing + Mate + Programs
SuperTuxKart 0.8.1 ရောက်ရှိလာသည်